KTV ရဲ့ နောက်ကွယ်""
အိမ်ထောင်သည် မိန်းကလေးတွေဘက်က စာနာကြည့်ပါ 😡
အိမ်မှာနေပြီး အိမ်အမှုကိစ္စက တစ်ဖုံ/ ကလေးက တစ်ဖက်နဲ့ အိမ်အပြင်မထွက်ရလို့ KTV တောင် ဘာမှန်းမသိသေးတဲ့ အိမ်ထောင်သည် မိန်းကလေးတွေ အတွက် KTV မှာ အပျော်မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပျော်မြူးနေတဲ့...
ပျော်မြူးတတ်တဲ့ ယောက်ျားနဲ့ရရင် တကယ်ရင်နာစရာပါပဲ 😖...ကိုယ့်မိန်းမအပေါ် ကိုယ်သစ္စာ ရှိသင့်တာပေါ့....
ယောက်ျား ဆိုတဲ့ အမျိုးကလည်းတော်တော်တော့ခတ်သား အသစ်တွေ့တိုင်း နှာခေါင်းက မီးတောက်ချင်တဲ့သူတွေများသား (တစ်ချို့တွေပြောတာ) ....
မိန်းမကို မကြည့်ရင်လည်း ရသေးတယ် အသာထား ကိုယ့်အသွေးအသားနဲ့ မွေးလာတဲ့ အိမ်က ကလေးတွေကို မိမိမှာ ရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေရဲ့အောက်မှာ အရိပ်မည်းတွေရဲ့အောက်မှာ ရှင်သန်စေချင်လို့လား? နေစေချင်လို့လား ??
အဲ့လို သားသမီးတွေ မျက်နှာမထောက်.ကိုယ်ချစ်လို့ ယူထားတဲ့ မိန်းမ မျက်နှာ မထောက်ပဲ တွေ့ရာ အပျော်မယားတွေ နဲ့ နှားခေါင်း မီးတောက်နေရင် သင် ဖခင်ကောင်း အိမ်ထောင် ဦးစီးကောင်း မပီသလို့ပဲ...။
KTV ရဲ့နောက်ကွယ်တစ်နေရာမှာ မိမိကို အရမ်းချစ်တဲ့ ဇနီးသားသမီးတွေ ဘယ်လို နေကြလေမလဲနော်...
ဘာမှ မသိရှာဘူး ကိုယ်လုပ်တဲ့ မကောင်းမှူက ကိုယ်အသိဆုံးပါပဲ...။
ကျွန်တော် ပြောချင်တာက အိမ်ထောင်သည် မိန်းက​လေးမှန်သမျှ ကိုယ့်ယောက်ျား လိမ္မာတယ် ထင်ပြီး အယုံအကြည်မလွန်ဖို့ပဲ...။
အလုပ်ဗန်းပြပြီး အိမ်ပြန်နောက်ကျ အလုပ်နောက်ကျလို့ပါ ညအချိန်ပါ အချိန်ပို လုပ်နေရလို့ပါ ဆိုပြီး မိန်းမကို လှည့်ပတ်ပြီး KTV / Night Club တွေမှာ အပျော်မိန်းကလေးတွေနဲ့ ဟေးလား ဟားလား ပျော်ပါး ဆက်ဆံ နေထိုင်တဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကို ဖျောက်သင့်ပြီ😡
Credit : Bone_Myat_Tun
KTV ရဲ့ နောကျကှယျ""
အိမျထောငျသညျ မိနျးကလေးတှဘေကျက စာနာကွညျ့ပါ 😡
အိမျမှာနပွေီး အိမျအမှုကိစ်စက တဈဖုံ/ ကလေးက တဈဖကျနဲ့ အိမျအပွငျမထှကျရလို့ KTV တောငျ ဘာမှနျးမသိသေးတဲ့ အိမျထောငျသညျ မိနျးကလေးတှေ အတှကျ KTV မှာ အပြျောမိနျးကလေးတှနေဲ့ ပြျောမွူးနတေဲ့...
ပြျောမွူးတတျတဲ့ ယောကျြားနဲ့ရရငျ တကယျရငျနာစရာပါပဲ 😖...ကိုယျ့မိနျးမအပျေါ ကိုယျသစ်စာ ရှိသငျ့တာပေါ့....
ယောကျြား ဆိုတဲ့ အမြိုးကလညျးတျောတျောတော့ခတျသား အသဈတှတေို့ငျး နှာခေါငျးက မီးတောကျခငျြတဲ့သူတှမြေားသား (တဈခြို့တှပွေောတာ) ....
မိနျးမကို မကွညျ့ရငျလညျး ရသေးတယျ အသာထား ကိုယျ့အသှေးအသားနဲ့ မှေးလာတဲ့ အိမျက ကလေးတှကေို မိမိမှာ ရှိတဲ့ မကောငျးတဲ့ အကငျြ့ဆိုးတှရေဲ့အောကျမှာ အရိပျမညျးတှရေဲ့အောကျမှာ ရှငျသနျစခေငျြလို့လား? နစေခေငျြလို့လား ??
အဲ့လို သားသမီးတှေ မကျြနှာမထောကျ.ကိုယျခဈြလို့ ယူထားတဲ့ မိနျးမ မကျြနှာ မထောကျပဲ တှရေ့ာ အပြျောမယားတှေ နဲ့ နှားခေါငျး မီးတောကျနရေငျ သငျ ဖခငျကောငျး အိမျထောငျ ဦးစီးကောငျး မပီသလို့ပဲ...။
KTV ရဲ့နောကျကှယျတဈနရောမှာ မိမိကို အရမျးခဈြတဲ့ ဇနီးသားသမီးတှေ ဘယျလို နကွေလမေလဲနျော...
ဘာမှ မသိရှာဘူး ကိုယျလုပျတဲ့ မကောငျးမှူက ကိုယျအသိဆုံးပါပဲ...။
ကြှနျတျော ပွောခငျြတာက အိမျထောငျသညျ မိနျးက​လေးမှနျသမြှ ကိုယျ့ယောကျြား လိမ်မာတယျ ထငျပွီး အယုံအကွညျမလှနျဖို့ပဲ...။
အလုပျဗနျးပွပွီး အိမျပွနျနောကျကြ အလုပျနောကျကလြို့ပါ ညအခြိနျပါ အခြိနျပို လုပျနရေလို့ပါ ဆိုပွီး မိနျးမကို လှညျ့ပတျပွီး KTV / Night Club တှမှော အပြျောမိနျးကလေးတှနေဲ့ ဟေးလား ဟားလား ပြျောပါး ဆကျဆံ နထေိုငျတဲ့ အကငျြ့ဆိုးတှကေို ဖြောကျသငျ့ပွီ😡